🥇 ▷ Dukaanka Epic Games Store wuxuu ka saarayaa taariikhaha la qiyaasay ee casriyeynta mustaqbalka khariidadeeda ✅
Dukaanka Epic Games Store wuxuu ka saarayaa taariikhaha la qiyaasay ee casriyeynta mustaqbalka khariidadeeda
TO Dukaanka Ciyaaraha Epic Waxay leedahay waddo dheer oo ay ku tagi karto si ay u noqoto dukaan hagaagsan marka loo eego qaybta aragtideeda iyo howlaha ay qabto. Ilaa iyo hadda in yar ayaa la soo dhexgeliyey iyo khariidad-hawleed uu isagu asaasay bilo ka hor waxaan ka heli karnaa fikrad ah goorta ay qaarkood kuwan imanayaan cusbooneysiinta mustaqbalka.
Nasiib darrose, waa la arkay in waqtigii lagu tuuray kooxda, sababta oo ah wararka qaar ee aan arki doonno weli lama fulin. Sidaa darteed, dhaleeceyntii uu u soo gudbiyey awgeed, wuxuu go’aan ku gaadhay tirtir taariikhaha la qiyaasay guddiga halkaas oo xogtan oo dhan ka muuqatay.
Shirkadda ayaa qoraal ku qirtay arrintaas Si sax ah uma aanan ahayn waqtiyada imaatinka kulanka sababtuna waa isbeddelada joogtada ah ee dhacay sababta oo ah ahmiyada la siinayo dhinacyada kale. Taas ayaa keentay inuu jeclaado beddel naqshadda oo u adeegso guddiga, halkaas oo aan ku arki karno sida khariiddada wadadaagu u dhisan tahay.
Taas macnaheedu waa in taariikh dambe ma arki doonno. Halkii dhammaan faahfaahinta ayaa loo qaybiyaa afar tiir: cusboonaysiinta ugu dambaysa, ee la filayo inay noqon doonaan kuwa soo socda, warka ka shaqeeya mustaqbalka iyo dhammaan macluumaadka ku saabsan boodh kasta.
Qaar ka mid ah howlaha aan dhowaan arki doonno Iyagu waa counter waqti la ciyaaray, ilaalinta xogta weyn marka lacag bixinta, hagaajinta si loo helo ciyaaraha ama sidoo kale in ciyaaraha Ubisoft uma baahna meel aad u badan si loogu rakibo. Dhanka kale, waxaan xasuusanahay in keydinta daruurta dhawaanahan loo suurta galiyay cayaaraha qaarkood, marka lagu daro bixinta wajiga kor u qaadida qaabeynta dukaanka oo dhan.
Wadaag dukaanka ciyaaraha Epic wuxuu ka saarayaa taariikhaha la qiyaasay ee casriyeynta mustaqbalka ee khariidaddaada